သီချင်းများရဲ့နောက်ကွယ်က ရာဇဝင်တွေ (၁)
On April 27, 2018 June 4, 2018 By fairy
ပြိုလဲကြေကွဲနေရတဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဖွင့်ဟပြောပြချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ…..
စိတ်ဓာတ်ကျအားငယ်နေတဲ့အခါ ဖေးကူသူလိုနေတဲ့ အချိန်တွေမှာ……..
ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုတွေကို မျှဝေချင်တဲ့အခါတွေမှာ……လူတွေဟာ အနုပညာကိုပိုပြီးခံစားတတ်ကြပါတယ်တဲ့။
အမျိုးမျိုးသောအနုပညာတွေထဲကမှ ကိုယ်တွေနဲ့ နေ့စဉ်နဲ့အမျှရင်းနှီးနေရတာကတော့ သီချင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်…..
သီချင်းဆိုတာမျိုးကလည်း ကိုယ့်ခံစားချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီဆိုရင် တစ်ပုဒ်တည်းကိုအပြန်ပြန်အလှန်လှန်ထပ်ခါထပ်ခါ အကြိမ်ပေါင်းထောင်သောင်းနားထောင်ရင်တောင် မရိုးတတ်တဲ့အမျိုးကိုး…..
ဒီရက်ပိုင်းအက်မင်ပြန်နားထောင်ဖြစ်နေပြီး ဘယ်တော့မှ မရိုးသွားတဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ Yesterday ဆိုတဲ့သီချင်းလေးအကြောင်းကို ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းလေးဟာ The Beatles ရဲ့ အရမ်းကိုကျော်ကြားခဲ့တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး officially cover အနေနဲ့ပြန်ဆိုထားတာတောင် version ပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော်ရှိတဲ့အတွက် ဂင်းနစ်စံချိန်တင်ထားခံရပါတယ်။
A post shared by Paul McCartney (@paulmccartney) on Sep 15, 2016 at 4:23am PDT
Beatles ဟာ Rock&Roll Band တစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် ထူးထူးခြားခြား Pop genre ဖြစ်တဲ့ ဒီ Yesterday သီချင်းကို သူတို့ရဲ့ Help! ဆိုတဲ့ Album မှာထည့်ခဲ့ပြီး released လုပ်ခဲ့တာပါ။ ဘာလို့ pop ဖြစ်နေရလဲ?? ဘာလို့ Rock album မှာ စည်းမျဉ်းတွေကိုချိုးဖျက်ပြီး Pop သီချင်းကိုထည့်ရဲရတာလဲ?? ဆိုတာတွေအတွက် အဖြေတစ်ခုရှိပါတယ်။ သီချင်းရဲ့ တေးသွားလေးက အရမ်းကိုကောင်းနေလို့ပါ။ Beatles အနေနဲ့ ဒီသီချင်းကို လပေါင်းများစွာကြာအောင်ရေးခဲ့ရသလို သီချင်းခေါင်းစဉ်အတွက်လဲ တော်တော့်ကိုခေါင်းစားခဲ့ရပါတယ်တဲ့။ ဒီသီချင်းရဲ့ လူသိများတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ သူ့ရဲ့ မူရင်းခေါင်းစဉ်ဟာ “Yesterday” မဟုတ်ပဲ “Scrambled eggs” ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲ။
Beatles ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Paul ဟာတမနက်မှာတော့ ထူးဆန်းတဲ့ အိပ်မက်ကိုမက်ပြီးနိုးလာခဲ့ပါတယ်။ နိုးနိုးချင်း အိပ်ယာဘေးမှာရှိနေတဲ့ ပီယာနိုကိုတီးပြီး အိပ်မက်ထဲကတေးသွားကိုတီးခတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ အရမ်းကိုကောင်းနေတော့ မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရသတဲ့။ ရထားတဲ့တေးသွားဟာ ကောင်းလွန်းလို့ Paul တစ်ယောက်ဘယ်လောက်တောင်မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ ဒီသီချင်းဟာ သူကြားဖူးထားတဲ့တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ သီချင်းများဖြစ်နေမလားလို့ အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေကို ထပ်ခါထပ်ခါတီးပြပြီး ခဏတိုင်း ဒီသီချင်းကို ကြားဖူးသလားလို့မေးလွန်းလို့ တစ်ခါသားမှာ ရိုက်ကူးရေးလုပ်နေတုန်း ဒါရိုက်တာက နောက်တခါ အဲ့ **သီချင်းတီးတာမကြားချင်ဘူးလို့တောင် အပြောခံရဖူးတယ်ဆိုပဲ။
Paul ဟာ ဒီသီချင်းအတွက် စာသားကိုလဲ မထင်မှတ်ပဲ ခရီးထွက်နေတုန်းလမ်းမှာ စဉ်းစားခဲ့မိတာပါ။ အရင်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ scrambled eggs ဒါဒါဒါ ဘလာဘလာပေ့ါလေ….. အဲ့ဒီမှာပဲ ကာရံကိုက်မယ့် စကားလုံးတွေကို အဆက်မပြတ်တွေးမိပြီး သီချင်းတစ်ပုဒ်လုံးနီးပါးရဲ့ စာသားတွေကို ရေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ အချောသတ်ပြီးနောက်ပိုင်း သီချင်းသွင်းမယ်လဲဆိုရော တီးဝိုင်းတစ်ခုလုံးတူတူပါဖို့စီစဉ်ထားပေမယ့် ပြဿနာက drum သမားဆီကစပါတယ်။ Drum သမားကသီချင်းစဖို့အတွက် သူဘယ်လိုမှလိုက်ဖက်အောင်မတီးနိုင်ပါဘူး ဘယ်လိုမှကို အာရုံမရဘူးကွာ ဆိုတော့ အဖွဲ့သားတွေအားလုံးကလဲ Paul ကို သီချင်းတစ်ပုဒ်လုံးသူ့တစ်ယောက်တည်းဆိုပြီး ဂီတာလေးနဲ့ပဲ solo လုပ်ကွာဆိုပြီး မြှောက်ကြပါတယ်။ အဲ့လိုနဲ့ပဲ ထုတ်လုပ်သူဖြစ်တဲ့ George Martin နဲ့ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံညှိနှိုင်းကြပြီးနောက် တခြားကြိုးတပ်တူရိယာတွေနဲ့ပဲ ပူးတွဲပြီးဆက်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။
Yesterday သီချင်းဟာ ၁၉ရာစုအတွင်းမှာ အကောင်းဆုံးသီချင်း၊ တသက်တာအကောင်းဆုံး နံပါတ်တစ် pop သီချင်းအဖြစ်နဲ့ MTV ကသတ်မှတ်ထားခံရပါတယ်။ ၁၉၆၅ တုန်းက released လုပ်ထားတာဖြစ်လို့ အခုဆို ၅၃သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဟာ အခုခေတ်မှာနားထောင်ရင်လဲ ခံစားလို့ကောင်းနေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက် အမျိုးမျိုးသော စံချိန်တွေဆုတွေရထားတာ ဘာမှမဆန်းဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။
၂မိနစ်ကျော်ပဲရှိတဲ့သီချင်းဟာ သိပ်ကိုရိုးရှင်းတဲ့ အကြောင်းအရာလေးကိုပဲရေးဖွဲ့ထားပေမယ့် အိပ်မက်ဆန်တဲ့ တေးသွားလေးကြောင့် လူတွေကိုဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တာလို့ ထင်မိပါတယ်။ တခါတလေ မိုးတွေညိုနေတုန်း…… ညနေခင်း လေကြမ်းတွေတိုက်နေတုန်းများ မတော်တဆဒီသီချင်းလေးကြားမိရင် ဘယ်သူ့ကိုပဲပြေးလွမ်းရမလိုဖြစ်ရတဲ့ ခံစားချက်တွေဖြစ်ပေါ်စေမယ့်သီချင်းလေးပါ။
မကြားဖူးဘူး နားမထောင်ဖူးဘူးဆိုရင်တော့ တစ်ခါလောက်ကြားဖူးသည်ရှိအောင် နားထောင်သွားပါဉီးနော်။ တစ်ခုခုခံစားသွားရမှာပါလို့….
PREVIOUS POST Previous post: Idol ဆိုတာ ရုပ်လေးပြစားနေတယ်ဆိုတဲ့ အမြင်တွေကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ခဲ့တဲ့ Idol များ!
NEXT POST Next post: Avicii suicide လုပ်သွားခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းရင်းများ